ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA AMIN’NY ASA NY LALÀNA
Amin’ny teny hafa, ny torohevitra araka ny lalàna momba ny asa ny lalàna dia manampy ny mpiasa sy ny mpampiasa mba hisahana ny asa fifandraisana sy ny hafa mifandray akaiky aminy ny fifandraisana ny unearned toetra amam-panahy.
Fandraisana toro-hevitra, ny mpiasa dia matoky, fa ny mpampiasa dia mitondra azy amim-pahatsorana fa izy no azo antoka manohitra ny ratra eo amin’ny asa, avy amin’ny tsy fananana asa, ary dia hiala amin’ny faran’ny ny asa lalana. Ny mpampiasa, koa izany torohevitra izany ho mahasoa ny zava-misy fa ny fandraharahana dia ho azo antoka avy tsy marin-toetra mpiasa, fa ny famokarana dia tsy tampoka teo dia tsy ara-dalàna jereo fa ny olona rehetra izay miasa ao amin’ny orinasa dia ho azo antoka ara-tsosialy tsy misy vola fanampiny sy ny fieritreretana madio teo anoloan ny olona sy ny fanjakana.
Torohevitra araka ny lalàna dia hanampy hamaha ny olana mikasika ny marary fialan, fandroahana, ny mpiasa, ny asa, ny boky, ny fiterahana, ny fandraisana ny tsy fananana asa soa sy ny ratra ao amin’ny toeram-piasana.
Fakan-kevitra efa voasoratra ao amin’ny tranonkala mpisolovava, izay maha-matihanina dia tsy isalasalana, fa raha toa ka mila tsiambaratelo ara-dalàna ny toro-hevitra amin’ny asa ny lalàna ny fakan-kevitra miantoka ny sarany rehetra ny angon-drakitra manokana dia hitoetra eo Aminao sy Ny mpahay lalàna izay hametraka ny fahalalana rehetra sy ny traikefa mba hamaha Ny olana tsara sy haingana araka izay azo atao
MANGATAKA NY MPISOLOVAVA AN-TSERASERA TSY MISY FISORATANA ANARANA